त्रि.वि स्ववियू सभापतिमा अनेरास्ववियूबाट थापाले उमेदवारी दिने – ToplineKhabar
त्रि.वि स्ववियू सभापतिमा अनेरास्ववियूबाट थापाले उमेदवारी दिने
January 30, 2017 February 8, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
प्रदेश नम्बर ७, ; सेतीअञ्चल बझाङ जिल्लामा जन्मनु भएका मंगल थापा कक्षा नौ देखिनै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा आवद्ध भएका थिए । उनी सानै उमेर देखि अरुलाई सहयोग गर्न, सामाजिक क्रिर्याकलापमा भागलिने आत्मीय र दयालु स्वभावका युवा पुस्तामा चिरपरिचित छन । विकट मानिने सात नम्बर प्रदेश अन्तरगत पर्ने बझाङ जिल्ला देखि मंगल थापाको उच्च शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हासिल गर्ने सपना र सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययन गर्ने उनको धोको थियो । उनको यात्रा राजधानीमा अवस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्म पुग्यो । अहिले उनी मानविकी संकाय अन्तरगत अंग्रेजी विभाग दोस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन । आगामि फागुन १४ मा हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियको चुनावमा एमाले निकट भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू ) बाट सभापतिमा उमेदवारी दिने तयारिमा रहेका मंगल थापा संग टपलाईन खबरका लागि प्रदीप भट्टले गरेको कुराकानी :-
विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी हक हितका लागि भन्दा राजनीतिक उदेश्य पुर्तिका लागि भन्ने बहस भइरहेको पाईन्छ । यसमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
राज्य सञ्चालनमा माउ नीति नै राजनीति भएकाले कुनै पनि देशको राजनीतिक आन्दोलन सायदै सफल हुन सम्भव छैन होला, जहाँ युवा विद्यार्थीको सहभागिता नहोस् । हामि राजनीतिक परिवर्तनको यहि अनिवार्य, ऐतिहासिक र गौरवशाली अभियानको अभिन्न अंग बनेर आएका छौं । विगत संसदीय दलहरुले युवालाई सत्तामा पुग्ने साधन बनाए तर अव त्यसो हुन्न । हामिले नयाँ कोर्स सुरुगेका छौं । अबको युवा पुस्ता यो कोर्समा लाग्नु पर्दछ । चाहे जस्तो सुकै जिम्मेवारी पुरा गर्न किन नपरोस् ।
मलाई त्यसो लाग्दैन । बार्षिक प्रणालिको भन्दा थप सेमेस्टर प्रणालिलाई परिणाम मुखि बनाउन हाम्रो संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कदमलाई सहयोग ग¥यौं । जसको परिणाम अहिले त्रि।विमा सेमेस्टर प्रणालि चलिरहेको छ । राजनीतिक चेतना सबैमा हुन्छ । राजनीति बिना समाज चल्दै भन्ने कुरा पनि हामीले उत्तिकै बुझेका छौं । सेमेस्टर पढेपनि, बार्षिक प्रणालि पढेपनि, विद्यार्थी भए पनि नभए पनि समाजमा बस्ने जो सुकै ब्यक्तिको पनि राजनीतिक चेतना हुन्छ । त्यसकारण मैले राजनीति गरे जस्तो लाग्दैन । जानेको बुझेको कुराहरु विद्यार्थीहरुलाई सिकाउने र हाम्रो आन्दोलनमा सँगै लैजाने जस्तो लाग्दछ ।
तपाईसँग त्रि.वि विकासको योजना के छ ?
सेमेस्टरमा भर्ना भईरहेका विद्यार्थीहरुको विचमा एउटा वृहत सेमिनार संचालन गरिनेछ । जसबाट विद्यार्थीले के ग्रहण ग¥यो के गरेनन् र त्यसलाई कसरि समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छन यो नै मेरो पहिलो कदम हुनेछ । विभागहरुमा भर्नाको व्यवस्था मिलाईने छ ।
तपाईलाई अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले स्ववियू सभापतिको उमेदवार बनाउछ त ?
बनाउछ भन्ने कुरो नै होईन । म अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनबाट स्ववियू सभापतिको उमेदवार हो । मेरो लगाव र संगठन प्रतिको मेरो जिम्मेवारीको आधारमा संगठनले पनि मलाइनै सहयोग गर्छ त्यसमा म विश्वस्त छु । र सबै साथीहरुलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहान्छु । मेरो त्याग र वलिदानको कारण यहि फागुन १४ गते हुने स्ववियू चुनावमा स्ववियू उमेदवारको नाम दत्र्ता गराउछु ।
तपाईलाई संगठने स्ववियू सभापतिको उमेदवारीमा नाम दत्र्ता गराएन भने के गर्नु हुन्छ ?
मलाई मेरो संगठन प्रति पूर्ण विश्वास छ । अनेरा स्ववियूले स्ववियु सभापतिमा मलाई बिना संका मेरो उमेदवारी दत्र्ता गर्छ ।मेरो योगदान लाई हेर्छ । जस्ले त्रि.विको समग्र विकास गर्न सक्छ, विद्यार्थीका समस्या हल गर्न सक्छ । वर्तमान परिस्थीतिलाई आफ्नो अनुकुलतामा चलाउन सक्छ । त्यो व्यक्ति लिडर बन्न सक्छ । त्यसैले यी सम्पुर्ण कुराको सामना गर्न सक्ने गुण म मा भएकाले पनि मरो उमेदवारी दत्र्ता हुन्छ ।
यदि भएन भने मलाई सहयोग गर्ने मेरा सहयोगि साथीभाईहरु सहयोग लिएर भएपनि उमेदवारी चाँहि दत्र्ता गराउदछु । सबैमा सहयोगको लागि अपिल गर्दछु ।
तपाई स्ववियू चुनावको लागि सभापतिको उमेदवारी दत्र्ता गराउदै हुनुहुन्छ । तपाई संग जित्ने आधार के छ ?
जित्ने आधार भनेको पहिलो संगठन नै हो । त्यसको लागि व्यक्ति ( लिडर ) सक्षम हुनु पर्छ । व्यक्ति ( लिडर )को हकमा म सक्षम छु ।
स्ववियू सभापतिको उमेदवारीमा मेरो जित्ने आधार
त्रि.वि मानविकी अंग्रेजी केन्द्रिय विभाग दोस्रो सेमेष्टरको नियमित अध्ययन विद्यार्थी भएकोले
२८ बर्ष पुरा नभएको भएकोले
त्रि.वि विकासको भावि योजन भएकोले
संगठनको जिम्मेवारी पुरागर्ने सक्ने लिडर भएकोले
विद्यार्थीका आम समस्या हल गर्न सक्ने क्षमता भएकोले
← प्रचण्ड र मधेसी मोर्चा सम्वन्ध विच्छेदतर्फ
चुनाव मिति घोषणा गर्न मधेसी मोर्चा सहमत, दुईदिनभित्र घोषणा गरिने →